QOLKA BALSAM, XEERARKA DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Dhibaatada waarta - Caadi ahaan xannaaneyn noo ah dhammaanteena tan iyo carruurnimada. Magaca Laatiinka Impatiens waxaa loo tarjumay "taabasho", sababtoo ah abuurka balsam wuu kala firdhinayaa jihooyinka kala duwan haddii aad taabatid. Caadi ahaan ubaxaani waxay la xiriirtaa caruurnimada, sababtoo ah ku dhowaad kasta oo ayeeyo oo guriga ku leh "Spark", sida loo yaqaan. Balsam waa mid ka mid ah xubnaha ugu badan ee qoyska Balsamiina (Balsaminaceae), oo leh wax ka badan 600 nooc. Dhulka dhul-beereedka - gobolada kulaylaha iyo kuwa hoose ee Afrika iyo Aasiya. In Europe, geedka ugu horeysay wuxuu u muuqday 1596.
Dhirta balsam: xulashada meesha, heerkulka iyo iftiinka
Haatan wax yar ayaan ka hadalnaa qolka balsam iyo daryeelka isaga. Mid ka mid ah magacyadiisa - "Vanka Mokry" - balsam ayaa la heley sababtoo ah "maandooriye" oo qoyaan ah. Balsam waa geedka aan qabin. Way ka fiican tahay inaad meel dhigto meel wanaagsan oo iftiin leh, laakiin sida habka sida tooska ah ee iftiinka qorraxdu u dhicin.
Haddii aadan haysan meel daaqada daaqada ah, oo lagugu qasbo inaad "beerato" ubax geeska ku yaal - ha quusan, oo halkaan ku kori doono, kaliya ma noqon doono mid aad u tiro badan. Xilliga jiilaalka, dhirta waxaa ugu wanaagsan dhinaca bariga, iyo xagaaga si aad u nadiifisid balakoonka si joogto ah u helaan hawo cusub. Ha ku dhejin balsam meel u dhow guluubka ama bateriga, maadaama ubaxa laga yaabo inuu ka dhaco hawada qallalan.
Daryeelka balsamiin gudaha ah waxaa kale oo ku jira xaaladaha heerkulka saxda ah ee ku haboon dhirta. Sababtoo ah asal ahaan, balsam waa heer kulul, iyo heerkulka ugu habboon ee loogu talagalay waa + 18-22 ° C xagaaga iyo + 8-12 ° C jiilaalka. Haddii aad raacdo talooyinka ku saabsan sida loo daryeelo balsam gudaha ah, waxay ku farxi doontaa midabkiisa sanadka oo dhan. Warshadani waxay bilaabmaysaa inay ubaxdo sanadka ugu horeeya. Balsam waa la koray oo kaliya maaha sida guri, laakiin sidoo kale sida beerta.
Ma taqaanaa? England, balsam waxaa loo yaqaan "Diligent Lisa" awood u leh inay si joogto ah u jajabiso.
Doorashada dheriga iyo diyaarinta ciidda beeritaanka
Balsam dhirta koritaanka ayaa ka wanaagsan in la qaado wax yar oo ka badan nidaamka xididka ee ubaxa. Waqti ka dib, marka dhirta ku kora dheriga, dadka badani ma faragalinayaan ubax badan. Kuwo badan ayaa xiiseynaya: sida loo xareeyo balsam? Waa wax aad u fudud, waanan ka hadli doonaa. Qeybta koowaad ee kobaca wanaagsan waa ciidda balsamines - waa inay ahaataa waxoogaa acidic ah, iftiin iyo iftiimiyo oo leh qaabka soo socda: 2 qaybood oo ah dhul caleen, 1 qayb oo ah peat iyo 1 qayb oo ciid ah.
Waa muhiim! Ciidda loogu talagalay ubaxa ma aha in la bacrimiyo, sababtoo ah taasi waxay horseedi doontaa koritaanka cagaaran, oo aan midab lahayn.
Qayb muhiim ah ee ciidda loogu talagalay balsam waa faleebo tayo leh (waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dhoobo ballaaran). Qalabka cusub ee Guinea, humus ama compost ayaa lagu dari karaa ciidda.
Intee jeer ayay tahay biyaha balsam, daryeelidda dhirta.
Qolka Balsam uma baahna dadaalka badan ee daryeelka. Waraabinta waa inay noqotaa mid dhexdhexaad ah. Waxaa ugu wanaagsan in la gooyo ubaxa leh biyo kala gooni ah. Haddii biyuhu aad u adag tahay, karkari, sida qasriga, oo laga arki karo biyo adag, waxay u horseedi doontaa cudurada iyo isdabajinta dhirta. Waraabinta balsam waxay ugu fiican tahay dheriga dheriga, isku dayaya inaysan ku dhicin qaybta xididka.
Ma taqaanaa? Haddii waqti ka waqti si loo dabciyo lakabka sare ee carrada ee dheriga, ka dibna ubax aad balsam arki doonaa dhalaalaya.
Xilliga jiilaalka, balsam waraabinta waa in la sameeyaa marka lakabka ugu sareeya ee substrate dhoobo. Xilliga xagaaga, dhirtu waxay u baahan tahay in badan oo la waraabiyo, laakiin ku shub biyo ka sarreeya digsiga, sida xididada ayaa laga yaabaa inay bilawdaan biqilka sababtoo ah biyaha taagan. Balsam ma aha oo kaliya qurux badan, laakiin sidoo kale warshad caqli leh: waxay sheegaysaa la'aanta qoyaan leh caleemo hurdi ah.
Qayb muhiim ah ee daryeelka balsam waa bacarimiso. Guga, marka ubaxu uu bilaabo inuu si firfircoon u koro, waxaa lagula talinayaa in uu ku waraabiyo Bacriminta macdanta mar 2dii asbuucba hal mar. Xilliga balsam ubax ugu sii badan waa in lagu waraabiyaa xal nafaqo ah oo ka kooban fosfooraska iyo calcium.
Waa muhiim! Iyada oo qayb ka mid ah quudinta loogu talagalay balsam waa in aysan noqonin nitrogen, maadaama ay "gubtay" nidaamka xididka.
Balsam qolka ayaa sidoo kale u baahan in lagu nadiifiyo daryeelka saxda ah: hal mar toddobaadkii, buufin biyogeliyey biyaha caleemaha iyo ubax leh dhalo buufin.
Qalabeynta iyo dib u gurashada "Vanya qoyan"
Balsamada guntooda maaha mid adag sidii ay u muuqan karto. Floristists ku talinayaan manjooyin guga, isla mar ahaantaana leh transplanting. Haddii dhirtu aad u korodhay, markaa caleemaha waxay u baahan yihiin in la gooyo kala badh, ma iloobin inay ku baaraan si loo xidho xididdada la qalajiyey ama la jajabiyay, kuwaas oo laga saaro saldhigga xuduudaha. Balsam waa la isku shubi karaa mar ama laba jeer sanadkiiba. Haddii laguu siiyay ubax, ama aad iibsatay dukaanka, ka dibna waxaa lagugula talinayaa inaad si dhaqso ah u bedesho. Ku daadi dhuunta diyaarka ah, kadibna dhul yar. Ka dibna si tartiib ah uga soo jiid ubaxa dherigii hore, isku day inaadan waxyeello u geysaneynin rhizome, ku rid digsi cusub oo dabooli kara ciidda, tamp.
Waa muhiim! Ciidda Ph waa in ay ahaato heerka 5.5-6.5.
Qalitaanka ka dib, waxaad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta si aad u badan oo uga tagto. 2 toddobaad kadib, waxaad bilaabi kartaa inaad ku quudiso ubaxa.
Laba siyaabood oo lagu jaro balsam
Milkiilayaasha balsam badankood waxay ku daraan ubaxaan waxayna ka fekeraan sida loo faafiyo dhirta. Waxaa jira labo siyaabood oo waaweyn: isugeynta isku dhufashada iyo qaadashada balsam.
Daabacaadda abuurku wuxuu u dhacaa sidan: Beeraha ugu horreeya ee abuurka balsamic, waa in aad marka hore isticmaashaa walxo aan jirin, oo ay ku jiraan peat, perlite iyo vermiculite. Haddii aad dareentid qoryaha ama qashinka dusha sare, waa in laga saaraa. Isku qasinta maaddooyinka oo dhan, isku dar ah waa in lagu qooyay biyo fara badan mar kale isku daraan. Ku shub abuurka dusha sare, oo leh qashin qoyan leh "qaado" iyaga oo u wareeji isku dar ah.
Ma taqaanaa? Si aad u ogaato nooca abuurka ah ee la kariyey, calaamadee meelaha ku dhow dhirta leh cadayga.
Ka dib markii dhan abuurka la beeray, waa in lagu rusheeyey leh qadar yar oo peat ah. Ka dibna weelka leh miraha la daboolay filim oo ku riday meel kulul oo dhalaalaya, ka fogaanshiyaha raajooyinka tooska ah. Waxaad ubaahan tahay inaad hawo qaadato marka aad aragtid dhibco ku yaal korka weelka. Seeds Gagaab ah 2 ilaa 4 asbuuc. Marka laga soo baxo caleemaha ugu horreeya waxay u baahan tahay in la furo.
Oo hadda aynu ka hadalno sida loo dacaayado guntimaha balsam. Ka hor intaan la socon geedisocodka waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo qashinka (calaamadaha) caanaha, vodka ama wax kale oo jeermis dilaha ah. Iska jar qaybta kore ee jaranjarada dhowr cagood, ka saar caleemaha hoose. Jiriddu waa inay ahaataa 7-15 cm dheer, iyadoo ku xiran baaxadda geedka.
Bannaanka daboolka ah ee isku dar ah peat, vermiculite iyo perlite. Ku shub biyo diirran oo leh qadar yar oo ah kiniinka potassium. Badanaa waa la aqbalaa 5-7 maalmood. Gooyn ah oo si fiican u xidhan, waxay ku farxi kartaa ubax xilli ciyaareedkii ugu horeeyay.
Si qolka balsam ay kuugu farxaan sanado badan, daryeelku waa inuu noqdaa mid dhameystiran oo waqtigana ku habboon.